Pedro - Aza avela ny haizin'ny devoly - fanisana amin'ny fanjakana
Ilay Fiadidian'ny Fandriampahalemana ho an'ny	Pedro Regis	tamin'ny tsingerintaona faha-33 an'ny fizotran'ny 29 septambra 2020:
Ry zanaka malala, mpanjakavavin'ny fandriampahalemana aho ary avy any an-danitra mba hitarika anao ho any amin'ilay hany Mpamonjy tokana anao. Sokafy ny fonao ary raiso izay avy amin'ny Tompo. Aza avela hitarika anao hiala amin'ny lalan'ny famonjena ny haizin'ny Devoly. Naniraka ahy ny Tompo hiantso anao hiova fo sy ho masina. Aza manalavitra ny lalana izay efa natoroko anao. Ny lalan'ny fahamasinana dia feno sakana, fa ny Tompo kosa tia anao ary hiaraka aminao. Herim-po. Mialà amin'izao tontolo izao dia mivoiza mankamin'ny Paradisa, izay nahariana anao irery ihany. Miondrika am-bavaka. Marary ny zanak'olombelona ary mila sitrana. Handeha amin'ny ho avy ianao amin'ny fisalasalana sy fisalasalana. Aza mivadika amin'i Jesosy sy ny fampianarany. Na inona na inona mitranga, mijanona amin'ny Magisterium tena ao amin'ny Fiangonan'i Jesosy. Tiako ianao tahaka anao ary mangataka aminao aho hiaina ny Antso. Manana fahalalahana ianao, fa ny manao ny Sitrapon'Andriamanitra no tsara indrindra. Mandrosoa tsy misy tahotra. Hivavaka amin'ny Jesosy aho ho anao. Ity no hafatra izay omeko anao anio amin'ny anaran'ny Trinite Masina Indrindra. Misaotra anao noho ny namelanao ahy hanangona anao eto indray. Mitsodrano anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aho. Amen. Milamina.
← Marco Ferrari - Fidio izay…
St. Faustina - Ny vahaolana tokana →